राम मन्दिरको भूमिपूजा: हिन्दुत्वको राजनीतिमा मोदीको जित, अयोध्या-बाबरीको अन्त्यहीन दुःखद् कथा - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
प्रकाशित मिति: २१ श्रावण २०७७, बुधबार August 6, 2020
काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अयोध्यामा राम मन्दिर निर्माणका लागि भूमि पूजा गरेका छन् । राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र कोषले अयोध्यामा भगवान रामको मन्दिर निर्माण हुने क्षेत्रमा बुधबार प्रधानमन्त्री मोदीको उपस्थितिमा भूमि पूजा भएको हो ।
भूमि पूजा अघि मोदीले हनुमानगढीमा पूजा तथा आरती गरेका थिए । उनले रामललाको पनि दर्शन गरे । भूमि पूजाका लागि दिउँसो १२ बजेर ३५ मिनेट ३२ सेकेण्डको उत्तम साइत निकालिएको थियो।
भूमि पूजामा प्रधानमन्त्री मोदीसँगै उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ, संघका प्रमुख मोहन भागवत र राज्यपाल आनन्दीबेन पटेलसहित सहभागी छन् ।
हिन्दुत्वको अभियानसहित मोदीको चुनावी मुद्दा बनेको राम मन्दिर निर्माणसँगै भारतीय जनता पार्टी नयाँ चरणमा प्रवेश गर्नेछ।
अयोध्यामा राम मन्दिर बनाउनका लागि भारतको सर्वोच्च न्यायालयले फैसला सुनाएको १० महिनापछि निर्माण कार्यको पहिलो प्रकृया अगाडि बढ्न लागेको हो।
सन् १९८० को दशकको आखिरबाट सुरु भएको राम मन्दिर र मस्जिदको राजनीति लामो अदालती प्रकृयाबाट टुंगोमा पुगेको थियो। राम मन्दिरकै विषयलाई लिएर भारतमा जातीय हिंसा पटकपटक भड्किएको थियो भने धेरैले यसैको विषयलाई लिएर ज्यान गुमाएका छन्।
करिब पाँच सय वर्ष (१५२८–१५३०)अघि रामकोट गाउँमा एक स्तूपजस्तो वस्तुमा बनेको मस्जिदमा रहेको शिलालेख र सरकारी दस्तावेजका अनुसार यो मस्जिद हमलाकारी मुगल बादशाह बाबरको आदेशमा उनका गभर्नर मिर बाकीले बनाउन लगाएका थिए।
तर यसको कुनै रेकर्ड छैन, बाबर अथवा मिर बाकीले यो जमिन कसरी हासिल गरे र मस्जिद बन्नुअघि यहाँ के थियो?
मस्जिदको रेखदेखका लागि मुगलकालमा नवाबीमार्फत् र पछि ब्रिटिस शासनमा निश्चित रकम दिने गरिन्थ्यो। भन्ने र सुन्ने गरिन्थ्यो, यो मस्जिदका विषयमा स्थानीय हिन्दु र मुसलमानबीच थुप्रै पटक सङ्घर्ष भयो।
थुप्रै ब्रिटिस इतिहासकारले लेखेका छन्, १८८५ मा नवाबी शासनका बेला मुसलमानहरूले बाबरी मस्जिदमा जम्मा भएर केही सय मिटर पर रहेको अयोध्याको प्रतिष्ठित हनुमानगढी मन्दिरमाथि कब्जा गर्न धाबा बोले। उनीहरूको दाबी हुन्थ्यो, उक्त मन्दिर एउटा मस्जिद भत्काएर बनेको हो।
यस्तो रक्त सङ्घर्षमा हिन्दु वैरागीहरूले हमलाकारीलाई हनुमानगढीबाट लखेट्थे। उनीहरू भागेर बाबरी मस्जिद परिसरमा लुक्थे, तर त्यहाँ पनि कयौं मुस्लिम हमलाकारीको हत्या भयो र तिनलाई सोही स्थानमा गाडियो। विदेशी यात्री, इतिहासकार तथा कयौं संस्मरणका पुस्तकहरूमा लेखिएको छ कि, हिन्दु समुदाय निकै अघिदेखि नै मस्जिदवरपरको स्थानलाई राम जन्मभूमि मान्थे र पूजा गर्थे।
१८५७ मा प्रथम स्वतन्त्रता सङ्ग्रामपश्चात् नवाबी शासनको अन्त्य भयो र ब्रिटिस कानुन, शासन र न्याय व्यवस्था लागू भयो। यही क्रममा हिन्दुहरूले मस्जिदको बाहिरी हिस्सा कब्जा गरे र एउटा स्थान बनाएर भजनपूजा सुरू गरे, यसो गर्दा त्यहाँ झगडा भइरह्यो।
बाबरी मस्जिदका एक कर्मचारी मौलाना मोहम्मद असगरले ३० नोभेम्बर १८५८ मा लिखित उजुरी गरे। हिन्दुवादीले मस्जिदमा टाँसेर एक पूजास्थल बनाए अनि मस्जिदको पर्खालमा रामराम लेखेको उनले गुनासो गरे।
दुई पक्षको झगडा साम्य पार्न भनी बीचमा पर्खाल पनि बनाइयो, तर त्यहाँ पस्ने मूल ढोका भने एउटै रह्यो। मुसलमानहरूले लगातार यसको विरूद्ध उजुरी गरिरहे। १८८३ मा मन्दिर बनाउन अनुमति मागियो, तर अस्वीकृत भयो।
मस्जिदको छेउमा बनाइएको पूजास्थललाई राम जन्म स्थान मान्दै सर्वप्रथम २९ जनवरी १८८५ मा सिभिल कोर्टमा मुद्दा दायर गरियो। विभिन्नखाले बहस भए। न्यायाधीश हरिकिशनले दुवै पक्षका कुरा सुने। पूजास्थलमा रामको मूर्ति भएको, पूजा हुँदै आएको बताए। हिन्दु र मुस्लिम दुवैले त्यहाँ आफ्नो पूजा र नमाज पढ्दै आएको बताए। कतिपय सवालमा दुवै पक्षको दाबी सत्य पाइयो।
सबै कुरा हुँदाहुँदै पनि एकै ठाउँमा मन्दिर र मस्जिद हुँदा लडाइँझगडा हुने देखेर प्रशासनले मन्दिर बनाउने अनुमति दिएन। भविष्यमा झगडा नहोस् भनेर यस्तो निर्णय गरियो। यसरी मस्जिदको बाहिरी भागमा मन्दिर बनाउने कुरो अड्कियो।
समय बित्दै गयो, चित्तबुझ्दो निर्णय कसैले दिन सकेन। एकले अर्कोलाई आरोप लगाउँदै गए। दुवै पक्षले सो भूभाग आफ्नो रहेको दाबी गर्दै रहे। न्यायाधीशहरूका राय बाझिँदै गए। सबैले पुराना प्रमाण, रेकड अध्ययन गरे, तर तत्कालीन अवस्थालाई मत्थर पार्नुमै कल्याण रहेको देखे।
१९३४ मा बकरिदका दिन नजिकैको गाउँमा गौहत्याको विषयमा दङ्गा हुन पुग्यो। बाबरी मस्जिदमाथि हमला भयो, तत्कालीन ब्रिटिस सरकारले त्यसको मर्मत गरिदियो।
१९३६ मा मुसलमानका दुई समुदाय सिया र सुन्नीबीच यही विषयमा कानुनी विवाद भयो, मस्जिद कसको हो भन्दै। जाँच कमिटी बस्यो। मस्जिदका म्यानेजर मोहम्मद जकीले दाबी गरे– मिर बाकी सिया थिए। यसैले यो सिया मस्जिद भयो।
उता अर्का अधिकारीले ८ फेब्रुअरीमा आफ्नो एक रिपोर्टमा भनिदिए– मस्जिद स्थापना गर्ने बादशाह सुन्नी थिए र उनको इमाम र नमाज पढ्नेहरू सुन्नी हुन्, यसकारण मस्जिद त सुन्नी भयो।
दुवैबीच अदालतमा मुद्दा चल्यो। १९४६मा न्यायाधीशले सिया समुदायको दाबी खारेज गरिदिए। सोही कारण अहिले पनि सिया समुदायका केही नेता त्यसलाई आफ्नो मस्जिद बताउँदै मन्दिर निर्माणका लागि पनि जमिन दिने कुरा गर्छन्।
भारतमा अङ्ग्रेज शासन अन्त्य भएपछि हिन्दुहरूले पुनः पूजास्थलमा राम मन्दिर बनाउने कुरा उठाए। तर अधिकारीहरूले त्यहाँ केही पनि बनाउन दिएनन्। हिन्दुले नमाजीहरूलाई दुःख दिइरहेको कुरा उठिरह्यो।
भारत विभाजनपछि ठूलो सङ्ख्यामा मुसलमानहरू पाकिस्तानतर्फ लागे। विभाजनबाट उत्पन्न खतरा रोक्ने अग्रसर रहेका महात्मा गान्धीको हत्या भयो।
राम मन्दिर, चुनावी मुद्दा
समाजवादीहरूले काङ्ग्रेससँग टुक्रिएर आफ्नै पार्टी बनाए। आचार्य नरेन्द्र देवलगायत सबै विधायकले विधानसभाबाट संयुक्त राजिनामा दिए। मुख्यमन्त्री गोविन्दवल्लभ पन्तले अयोध्या उपचुनावमा नरेन्द्र देवका विरूद्ध एकजना हिन्दु सन्त बाबा राघव दासलाई उम्मेदवार बनाए।
अयोध्यामा मन्दिर निर्माणको सवाल यो निर्वाचनमा मुख्य मुद्दा बन्यो। राघव दासलाई समर्थन मिल्दै गयो। चुनाव उनैले जिते। नरेन्द्र देव राम मान्दैनन् भन्ने कुरा उछालियो र नै उनी हार्न पुगे।
मस्जिदमाथि खतरा बढ्दै गएको प्रहरी अधिकारीहरू बताउने गर्थे। मस्जिद सफा गर्दै हिन्दुले रामायण पाठ गर्न लागेकाले खतरा बढेको तिनले प्रशासनलाई बताउँथे।
बाबा राघव दासले आफ्नो जितपछि जुलाई १९४९ मा उत्तरप्रदेश सरकारलाई पत्र लेख्दै मन्दिर निर्माणको अनुमति मागे। मस्जिदको छेउमा सानो मन्दिर छ, यसलाई राम जन्मस्थल मानिन्छ, हिन्दुहरू त्यसलाई ठूलो बनाउन चाहन्छन्। यसलाई अनुमति दिन गाह्रो छैन भन्ने व्यहोरा प्रस्तुत भयो सिटी मस्जिट्रेटबाट। त्यसको केही दिनपछि भारतमा नयाँ संविधान लागू हुँदैथियो।
घटनाक्रमका कारण रिसाइरहेका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले २६ डिसेम्बरका दिन मुख्यमन्त्री पन्तलाई पत्र लेखे। ‘अयोध्याको घटनाबाट म विचलित छु। मलाई विश्वास छ, तपाईंले यस विषयमा व्यक्तिगत रूचि लिनु हुने छ। जे भइरहेको छ, त्यसको परिणाम खराब हुने छ।’ पत्रमा उनले भने।
मस्जिद रहेको ठाउँमा बनेका मन्दिर किन नहटाइएको भनेर कमिसनरलगायतका अधिकारीलाई प्रश्न सोधियो। जवाफमा भनियो– यो मुद्दामा व्यापक जनसमर्थन छ, त्यसैले प्रशासनका केही मानिसले यो रोक्न सक्दैनन्। यदि हिन्दु नेताहरूलाई पक्राउ गरियो भने अवस्था थप खराब हुन्छ।
आरएसएस र हिन्दुसभाका मानिसहरू मस्जिद कब्जा गर्न सहयोग गरिरहेका थिए। केही अधिकारी पनि यो घटनामा जोडिएका थिए।
नेताहरू नै अयोध्या–बाबरीमा विभजित थिए। राजनीतिक फाइदाको दाउ हेरिरहेका थिए। प्रधानमन्त्री नेहरूले गृहमन्त्री सरदार पटेललाई अयोध्या जान भने। सोही समय देश विभाजनका कारण उत्पन्न दङ्गा, मारकाट चलिरहेको थियो भने, पाकिस्तानको हमलाका कारण कास्मिरको अवस्था नाजुक थियो।
नेहरू लाचार थिए। नेताहरू साम्प्रदायिक बन्दै गएका थिए। कहिले उक्त विवादित स्थानमा मूर्ति राखियो त कहिले हटाइयो। भारतमा इमरजेन्सीपछि अयोध्या पेचिलो राजनीतिक मुद्दा बन्दै आएको छ। अयोध्यालाई देखाएर अधिकांश हिन्दुवादी नेताले निर्वाचन जित्दै आएका छन्। तर विवाद कायमै छ। मुद्दा चल्दै आएको छ।
यो विवाद केवल १५०० वर्ग गज जमिनका लागि भएको हो, जहाँ विवादित बाबरी मस्जिद छ। तर धर्म, इतिहास, आस्था र राजनीतिको रालघोलमा यो विषय यति जटिल बनेको छ कि, यसले भारतमात्र होइन संसारका अन्य देशमा समेत असर पार्दै आएको छ।
बुधबारदेखि सोह्र श्राद्ध शुरु, कुन तिथि कतिखेर ? (समय तालिकासहित)
काठमाडौं । प्रत्येक वर्ष आश्विन कृष्ण पक्षमा दिवंगत पितृका नाममा गरिने सोह्र श्राद्धका लागि आवश्यक पर्ने […]
श्रीकृष्ण जन्माष्टमी (यस्तो छ धार्मीक परम्परा)
काठमाडौं । वैदिक सनातन धर्मावलम्बीले ‘श्रीकृष्ण जन्माष्टमी’ पर्व आज देशभर भगवान् श्रीकृष्णको पूजा–आराधना गरी […]
‘खराब चिजबाट पनि असल कुरा लिन सक्नु महानता हो’- प्रेरक १४ भनाईहरु
काठमाडौं । लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा को जन्म वि. सं. १९६६ साल कार्तिक २७ गते ’लक्ष्मीपुजा’को दिन काठमाडौंको […]
स्वीकार आगो देऊ,वा अंगार बगर देऊ वा जंघार समिप देऊ वा दूरता प्रेम देऊ वा […]